राति निद्रा नलागेर छटपटी हुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्, पाउनुहुनेछ मज्जाको निद्रा – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Tips/राति निद्रा नलागेर छटपटी हुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्, पाउनुहुनेछ मज्जाको निद्रा
काठमाडौँ । पछिल्ल्लो समय कामको चाप र विभिन्न प्रकारका तनावका कारण थुप्रै मानिसहरुमा रातमा निन्द्रा नलाग्ने समस्या भएको पाइन्छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले ६ देखि ८ घण्टाभन्दा कम सुत्ने व्यक्तिहरुमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरु पैदा हुने गर्छ ।
कम निन्द्राका कारण रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमि आउने, पाचन प्रक्रिया गडबढ हुने, मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने, डिप्रेशन, तौल बढ्ने जस्ता समस्याहरु हुने गर्छन् ।
त्यसैले, निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने ?
यो पनि पढ्नुहोस, यी हुन् पेटमा ग्यासको समस्या निम्त्याउने ५ तरकारी’ कम्मर तथा महिनावारीमा पेट दुख्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सेवन गर्नुहोस्…
छिटो तर थोरै खाना खाने बानी बसाल्नुपर्छ। रातमा मिठो निन्द्राको लागि रातिको खाना छिट्टै खानुपर्छ। साथै रातिको खाना कम खाने गर्नुपर्छ । रातमा धेरै खाँदा एसिडिटी, पेट फुल्ने र अन्य समस्याहरु हुने गर्छ र रातको निन्द्रा खटपट हुनसक्छ।
कपाल झर्ने ८ कारण र घरेलु उपचार विधि